Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha FOOTBALL MANAGER Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname 'Pep'. Yedu Josep Pep Guardiola Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, Pep haisi kungozivikanwa seimwe yevatambi vakanakisisa vezera rake. Anowanikwa vakawanda semumwe wevatambi vemakwikwi anozivikanwa zvikuru munguva ino yemazuva ano.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Pep Guardiola Childhood Indaba
Josep "Muyambo" Guardiola Sala akaberekerwa Santpedor, Spain musi waJanuary 18th, 1971 kuna baba Valentí Guardiola, ainge asiya basa brick uye amai Dolors Sala Guardiola, munhu anotengesa. Iwe haasi iwe pfuma yose sevamwe vezvenguva yake. Yaiva yebhola rakamudya kubva pakutanga kwekutanga.
Kubvira kubva pazera remakore, Guardiola akaumba tsika yezuva nezuva yekubva kumba kuenda kunotamba kwebhola kwemaawa pane imwe nhandare-yakafanana nebhokisi rebhokisi pedyo neimba yababa vake.
Sezvakaitwa nababa vake, 'Pane nguva dzose yaive nemoto chaiwo wekuita kuti afare paKrisimasi uye izvo zvaiva kumupa bhora sechipo. Aigara aine bhora patsoka dzake. Kwese kwaaifamba, akaenda nebhola rainzi Sir Valentí Guardiola. '
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts-vabereki
Vabereki vaValdiola, Valenti uye Dolors, vachiri kurarama muSalpedor. Vakapika kuti havazombosiyi mumusha wakarara wakabatsira mwanakomana wavo 'Pep' pakutanga basa rake.
Vabereki vaPep Guardiola VaMnu Valenti naMadzi Dolors Guardiola
Vose mapato anogara achionekwa achifamba pamwe chete mudiki Municipality iyo dots the Barcelona countryside. Kusvikira musi, Santpedor achiri kuve nokuzivikanwa kwenyika yose iyo inopiwa mwanakomana wayo anozivikanwa zvikuru 'Pep'. Kusiyana naamai vake, baba vaPep vanofarira kutora nhau.
Mutungamiri naVaMu Guardiola vakaisa kuzvikudza kwavo kubudirira kwemwanakomana wavo izvo zvinoratidzwa mumifananidzo uye mementos inoshongedza imba yakanaka yemhuri.
Valenti Guardiola anoratidza zviratidzo zvemwanakomana wake.
Baba vake, havasi kungozivikanwa kuti vanonyanya kutaura pavanouya pakudzivirira mwanakomana wavo. Anofarira kuratidza kukakavadzana pamatambudziko ebhola.
Mazuva mashomanana chete Pep Guardiola's hurukuro yakaenda kuLigeria Premier yakasimbiswa, baba vake vakambovhiringidza bhodhi reChirungu sevari "Boring". Valenti Guardiola, akati hazvina kunyanya kuitika "Bhora refu uye kumhanya".
Valenti zvakare akati: "Ndinofanira kubvuma kuti bhora reChirungu harisi mukombe wangu weti. Iyo yakawanda yakareba mabhora uye inomhanya. Ndinosarudza bhora mwanakomana wangu anofarira kuzviita - zvakawanda zvokupfuura ipapo kushamiswa kunoshamisa apo gomba rinoputika rinotanga. "
Mukadzi Valenti Guardiola (Pep's Dad)
Mutambi wechechi Valti Guardiola akambova workaholic. Akaramba achishanda maawa 10 pazuva kubvira panguva ye 14 pazvivako zvekuvaka uye haana kumira kusvikira ndakanga ndiri 66. Haana kumbova nenguva yekutamba bhora sezvo mwanakomana wake 'Pep' akaita.
Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Sibling
Pep ine hanzvadzi mbiri dzakwegura uye munun'una wechidiki, Pere, uyo anozivikanwa zvikuru seimwe yevatambi vemahombekombe akanaka munyika yose.
Pep Guardiola naDhim mukoma, Pere
Pere Guardiola akazviitira zita mubhizimisi rebhokisi rebhola. Wake ane Luis Suarez se nhamba yake yekwereti. Pep anewo hanzvadzi mbiri dzinonzi Olga naFrancesca.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pep iye zvino akaroorwa naCristina Serra. Pep aiva nevana ava vainzi Marius, Maria naValentine vasati vava kuneta nheyo yemuchato mu2014.
Pep uye Mukadzi, Cristina Serra
Vakaroorana vaiva mutambo wakangwara wakaitirwa muCatalonia. Yakanga ichitarirwa neshamwari dzakanakisisa chete.
Imwe mhuri inofara yaPep Guardiola.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutanga neBhola Basa Rakaita seBlackboy
Pep Guardiola akatanga nzira yake yehutano hukuru seN Nou Camp ballboy master.
Akanga ari chikamu chekugadzirisa kwevechidiki kwaBarca apo Venables akauya semutungamiriri kumashure mu1984, uye akanga atozviratidza zviratidzo zvekuvandudza zivo yake yemutambo.
Mufananidzo uri pasi apa unoratidzira 14 wekare wechidiki Pep achipemberera neaimbova vashandi vokuEngland mushure mekunge atungamira kambani yacho pachigaro cheSpain mu
Kutanga neBhola Basa Rakaita seBlackboy
Shamwari kubva paudiki hwake dzakaratidza kuti kunyange panguva yakadaro, Guardiola akanga achikudziridza pfungwa imwe chete uye motokari yakamuita kuti ave mutungamiriri webhokisi wenyika mukurumbira. Uyu waiva gore mushure mekunge atanga basa rake rebhora kuBarcelona youth academy.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Pakutanga Football Career
Pep Guardiola Kubva Kambani Yemauto Career
Vakawanda vanomutaurira semudzidzisi wemwana wechechi uyo akatendeukira kune unyanzvi wemutambo uye mukuru mukuru webhola. Pep Guardiola akasiya basa rake bhora gore mushure mekutanga basa rake rebhora kuBarcelona youth academy.
Akatanga kutamba basa muBarcelona youth academy panguva ye13. Achimhanya semudziviriri, Guardiola akacherechedzwa nemudzidzisi wekambani yekutanga Johan Cruyff uye akaiswa mumukuru wechikwata panguva ye20. Akava mudziviriri mukuru muCatalan Dream team yeZ1990s iyo yaiti 6 La Liga mazita, 4 Spain Super mikombe, 1 European Cup, 1 UEFA Cup Winner's Cup uye 2 UEFA Super Cups. Yakazara akaonekwa mumakwikwi e479 kwechikwata mumwaka we 12 uye akaonekwa semumwe wevanhu vanovimbika vanodzivirira munguva yake.
Akatamba nemazita makuru akadai saRonaldo Luís Nazário de Lima, Xavi Hernández, Carles Puyol, Rivaldo Vítor Borba Ferreira uye iro rakakurumbira Luis Enrique uyo ari iye zvino kuBarcelona Coach sekunyora kwekunyora.
Pep Guardiola aimbova nhengo dzechikwata kuBarcelona achitamba mazuva
Akava neukama hwakanaka neAex Exporteur Jose Mourinho paakanga achiri mutambi ku FC Barcelona. CHIMWE CHOKUTAURA: Jose Mournho uyo aimbova mudzidzisi weBarcelona akamubata.
Pep Guardiola - Kudzoka mumazuva naJose Mourinho semudzidzisi wake
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti Pep Guardiola naLuis Enrique vaifambidzana navo kuBraça kwemakore mashanu kubva ku1996 kusvika ku2001. Akabatanidzwa ihwohwo uchapupu huri pasi apa;
Pep Guardiola naLuis Enrique kuBarcelona
Pep Guardiola akarega basa semutambi apo chibvumirano chake neQatari club Al-Ahli vakapedza muna June 2005. Akatanga kutora zvidzidzo mumwedzi iwoyo mushure mokurega basa.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Bhuku rake rekutanga reBarca rakanga risina kufara
Apo Guardiola achibva kuBaernern achapiwa rumbidzo yaanofanirwa, sezvaakange ari apo paakasiya Barcelona mu 2012. Ikobhu yacho yakave yakabata mwedzi wekuchema apo mutyairi akavaudza kuti ari kuenda, pamwe neboka rose pamwe nemutungamiri, mutungamiri wemitambo uye nhengo dzebato vari kupinda musangano wehurukuro. Yakazotevera pamwe nehurukuro yemitambo yemitambo uye kutaura kwekuendesa mberi pamberi pevanhu vakawanda vakapinda Camp Nou. Nzira iyo inofanirwa kuva nayo kana nhau inopera, unogona kukakavara.
Yakanga isiri iyo nguva dzose saizvozvo. Apo Guardiola akasiya Braça semutambo mu2001, akazviita kubudi pamusuo wemushure, incognito. Mumwe musi waApril masikati akabata musangano pamwe nemukuru-mutongi Joan Gaspart kuti amuudze kuti akanga achibva. "Rini? Pari zvino?!" yakanga iri kushamiswa mhinduro. Guardiola akasimbisa, akaudza Gaspart kuti aida kubata hurukuro yezvepanhau zuva rinotevera, achikumbira mutungamiri kuti amuperekedze.
Pep Guardiola haana kufara kuenda kunze kweBercelona
Sezvazvakazoitika, Gaspart akanga atotora bhizinesi kuSwitzerland iyo yaifunga kuti haigoni kudzokazve, uye saka haana kupinda. Guardiola, anowirirwa nhatu dzemitemo uye Barcelona yekutanga yeEurope Cup, akaparadzira nhau kune vega media.
Kusarura kusina kufanira kwomutambi uyo akanga aita zvakawanda zvakadai kwechirongwa, chaiva chakasiyana zvakasiyana nemhando yaunogona kuona muEngland, nyika yePep inoyemura kunyange zvakadaro. "Handizivi kwandichaita, asi ndine chido chemaChirungu," Guardiola akaudza vhidhiyo zuva iroro mu2001. "Ivo vakatendeseka. Ndinoyeuka nguva yekutanga yandakaita ku Old Trafford. Zvaishamisa ".
Hope dzake dzekutamba kuManchester United dzakapedzeredzwa nekuchinja kamwe kamwe kwepfungwa. Pep Guardiola akaita shanho kune rimwe diki rebhutaly reChitali, Brescia Calcio.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Last Club semutambi
Tendai kana kwete, asi kirabhu yekupedzisira Guardiola yakatamba yaiva Mexican neClub Social y Deportivo Dorados de Sinaloa. Pep akabatanidza chikafu cheMexico pazera re34 uye akatamba ikoko kwehafu yegore asati asvika kubva kune unyanzvi hwemutambo semutambi.
Pep Guardiola last club semutambo
Guardiola akaendeswa kunechikwata nemudzidzisi weSpain Juanma Lillo, kufamba kwakadaro kwakagadzikana sezvo akanga ari muchikoro chepamusoro muMexico panguva iyoyo.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Mutungamiri Wekuita Basa Kutanga
Basa raValdiola sezvo mutungamiri akangotanga kuBarça B mu2007, asi chaizvoizvo akanga atova nedzimwe ruzivo rwekudzidzisa chikwata chevashandi. Basa rake rokutarisira neboka reBarcelona rakatanga muna 2008.
Munguva yake ye 4-mwaka muBarca, Guardiola haana kungounganidza zvinyorwa zve14, asi zvakare akave nemhando yakasiyana-siyana yokutamba iyo yakashamisa vateveri vebhola munyika yose. Imwe yezvipfeko izvi inosanganisira iye kuti asafambidzana ne-on-one hurukuro, asi inongoridza hurukuro.
Mushure mokunge 2011 / 2012 yerimwe gore Guardiola akasimuka kubva kuBarcelona ndokuti aizove negore rekusabata muNew York City. Gare gare pazvakazarurwa aizotora kutonga kuBayern Munich kutanga kubva muChirungu 2013.
Guardiola akakunda musoro weBundesliga, DFB-Kunyora musoro, pamwe chete UEFA Super Cup neClub World Cup mazita ekutanga kwegore rake neBayern.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Rudo KweMafashoni uye Arts
Paguta redu, Guardiola anozivikanwa nekupfekedza zvipfeko zvishoma zvakakwana. (Dzimwe nguvawo zvishoma). Hapana munhu akambokwanisa kuziva apo Guardiola anowana masutu ake kubva, saka kana iwe uri kuverenga izvi, Pep, tapota pinda pahutano.
Rudo rwaPep rweMafashoni
Haatombotyi papa yemuvara. Nepo shati-ne-tie-pasi-a-yakatsvuka-V-mutsara pamwe chete isimba revatariri vebhokisi reEurope (kureva, Arsene Wenger, aimbova Aston Villa mutariri Tim Sherwood), Guardiola anovaisa vose kunyadziswa.
Pep Guardiola haana kumbofananidzwa
Zvipfeko zvake zvakadai sezviri pasi apa zvakagadzira zvinyorwa munguva yakapfuura. Pep Guardiola akamborondedzerwa semurume akakosha mumutambo webhola maererano nevepanhau reSpain. Mukadzi wake, Christina, ave akataridzirwa sechinhu chakakosha pamusana pemararamiro ake.
Pep Guardiola akapfeka maitiro akanaka
Achitaura nezvemapfeko, ukama hwaGurdiola nemudzimai wake Cristina Serra wakakura pedo neyemhuri yekugadzira mbatya dzemhuri muManresa, kuSpain kuchamhembe-kumabvazuva.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuenda kuGermany Beer Festivals
Imwe yezvokuvhima zvikuru zvePep iri kuenda kumabiko emabiko. The Oktoberfest Mutambo webheyeri ndiye waanoda. Iyi ibhi yevhiki mbiri yemabiko yakabatanidzwa gore rimwe nerimwe Munich, Germany munguva yekupera kwaSeptember uye kutanga kweOctober.
Pep Guardiola uye Beer Festivals
Inopindwa nevanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu gore roga roga uye yakafuridzira zviitiko zvakawanda zvakafanana vachishandisa zita racho Oktoberfest muGermany uye kumativi ose enyika, mazhinji ayo akatevedzerwa nevaGermany vanobva kune dzimwe nyika kana vana vavo.
Pep Guardiola Bheri Advert Commercial
Rudo rwake rwemhemberero dzomwaita rwakamuita kuti agamuchire imwe bhadha advert kune rimwe raimbova FC Bayern Munich team.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Munyori weMabhuku mazhinji
Pep Guardiola akanyora nhamba yakanaka ye mabhuku akatengeswa muAmazon pakati peiyo "Hell kunze kwetiki-taka uye kushanduka". Sangano rekushanduka-shanduka nezvematambudziko ake mumutambo webhokisi rekudzidzisa uye nekuenzanisira kune vaverengi kuti akaikunda sei kuti ave mutsigiri wenhabvu wenyika.
Uchapupu hwekuti Pep Guardiola ndiye munyori
Zvinyorwa zvepamusoro zveGudiodiola zvakasunungurwa mumakore achangobva kupfuura, zvichibva pane zvinyorwa zvinyorwa kusvika kune imwe nyaya yepanguva yenguva yake kuBayern yakanyorwa naMartí Perarnau. Asi iwe waiziva here kuti Pep pachake ndiye munyori?
Muna 2001, akabudisa bhuku racho La meva gent, el meu futbol (vanhu vangu, bhora rangu) pamwe chete naRu Martin naMiguel Rico, vaviri veSpain vanoremekedzwa zvikuru vevatori venhau vebhola. Chikamu biography, chikamu chinotungamira mutsara wePep, kubva pamuromo wemabhiza: an absolute unofanira kana iwe uchida kunzwisisa Guardiola.
Kune matambudziko maviri chete. Yokutanga ndechokuti inongowanikwa muCatalan, uye yechipiri ndeyokuti haisipo, kumira kwakakwana. Nguva yakareba kubva pakadhindwa, Guardiola haafariri kuona ichi chichibudiswa zvakare, pasinei nekukwanisa kuoneka kuita penny yakanaka.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Autos
Pep Guardiola ane kudya kwemanheru mukusarudza kwemotokari dzake. Anofambisa S8, motokari yakagadzirwa na Audi iyo mutengo iye zvino uri ku $ 170, 000. Nheyo dze 382-kW (520-hp) dzakawanda-dzakasviba Audi S8 dzakataurirwa kwaari naGeorge CEO Rupert Stadler.
Iyi motokari inoita kuti anzwe ari kumba mumugwagwa.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Faith
Pep Guardiola haasi yechitendero. Iye haatendi Mwari uye haatendi mukuvapo kwaMwari. Vanhu vaitarisira Guardiola kuva zvinyoro zvishoma zveKaturike, sezvinotarisirwa kubva kune vakawanda veSpanish.
Pep iri pakati pechikamu chevanhu veSpain vanozviona ivo vasiri vechitendero.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Rudo rweGorofu
Kuda zvipfeko zvakajeka zvinowanzoshandura kune rudo rwegorofu.
Guardiola akapinda mutambo we 2012 muMedinah pamusana wekukoka kwevatungamiri veYurope yeRyder Cup uye mumwe wevamiriri veJose Maria Olazabal. Kunze kwekubata kwake basa muEurope, Guardiola akapedza nguva naAlly weku Qatar uye Dorados de Sinaloa weMexico, izvo zvakaratidza swansong yake.
Pep Guardiola Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Rudo kuna Peter Crouch
Muna 2006, Guardiola akanyora mutsara wemakoroni El Pais munguva yeGermany World Cup, zviri mukati maro zvinopa kunzwisisa kunonakidza kwepfungwa dzake dzebhora. Chimwe chezvinonyanya kufadza kune izvo zvinosanganisira iye kuputika pamusoro pemudzivisi anonyanya kubva kubva munhangemutange, ane zita rinogona kuuya sechishamiso: Peter Crouch.
Pep's's self for Peter Crouch.
Yakagadziridzwa zuva: Ndira 30, 2019